डाक्टर विनय रेग्मी भन्छन्–यसरी चिन्नुहोस् डेंगुको लामखुट्टे
पछिल्लो समय देशभरी फैलिएको डेंगुले धेरै सर्वसारधारण त्रसित बनेका छन् । तर, ग्राण्डि अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर विनय कुमार रेग्मीले यसमा नआत्तिन र डेंगु लागि हाले पनि घरमा बसेर आराम गर्न सर्वसाधारणलाई सुझाएका छन् ।
त्यसैगरी शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पताल टेकुले पनि डेंगुका बारेमा जानकारी दिँदै डेंगु यो वर्षमात्र नभएर २०७२ मा पनि डेंगु लागेका मानिसहरु भेटिएको र त्यसयता वर्सेनी डेंगुका विरामी देखिइरहेको बताएको छ ।
बिशेषत बिहान र सांझपख टोक्ने पोथी लामखुट्टेका कारण यो रोग लाग्ने बताउँछन् डा. रेग्मी । केन्द्र सरकार मात्र नभएर स्थानीय सरकार पनि डेंगु नियन्त्रणमा लागेका छन् । उनीहरु पनि डेंगु लागि हाल्यो भनेर नआत्तिन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेका छन् ।
यसै विषयमा ग्रााण्डि अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर रेग्मीले पनि डेंगुको लामखुट्टे कसरी चिन्ने भनेर भिडियो सन्देश दिएका छन् । आउनुहोस् हेरौं डा. रेग्मी के भन्छन् त ?